हेर्नुहोस् मासिक राशिफल !! यी ५ राशिलाई मिलेको छ भगवान शिवको कृपा !! | सुदुरपश्चिम खबर
हेर्नुहोस् मासिक राशिफल !! यी ५ राशिलाई मिलेको छ भगवान शिवको कृपा !!
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : भदौ १९, २०७८ 31
अब सेप्टेम्बर महिना शुरु भएको छ। ग्रहहरु र नक्षत्रहरुको खेलका अनुसार सेप्टेम्बर महिना मेष, कर्कट, कन्या, तुला, वृश्चिक र धनु राशि भएकाहरुका लागि निकै शुभ रहेको छ । यो महिना केही राशिहरुका लागि भने त्यति अनुकुल रहने देखिँदैन । ग्रह गोचर अनुसार तपाईको ग्रहफल कस्तो छ हेरेर त्यहीअनुसार सर्तक रहनु सबैका लागि शुभ हुनेछ ।
मेष राशि भएकाहरुको लागि सेप्टेम्बर महिना समग्रमा राम्रो रहनेछ। यो महिना तपाईको आर्थिक स्थिति राम्रो रहनेछ। आम्दानी बढ्नेछ र आम्दानीको नयाँ बाटो पनि खुल्न सक्छ। क्यारियरको हिसाबले पनि यो महिना तपाईको लागि धेरै राम्रो रहनेछ। चाहे तपाइँ जागिर वा व्यापार गर्नुहुन्छ, तपाइँ प्रगति गर्नुहुनेछ। शिक्षा र लेखन पनि राम्रो हुनेछ।
वृष राशिका मानिसहरुको लागि यो महिना मिश्रित फल दिने छ। केहि क्षेत्रहरु मा, जहाँ शुभ परिणाम को एक बहुतायत हुनेछ, केहि क्षेत्रहरु मा समय थोरै गाह्रो हुन सक्छ। क्यारियरको हिसाबले यो महिना राम्रो रहनेछ। ब्यापार ब्यवसायीहरुले केहि बाधाहरुको सामना गर्नु पर्नेछ।
यो महिना तपाइँ मिश्रित परिणाम दिनेछन्। क्यारियर को दृष्टिकोण बाट, सेप्टेम्बर तपाइँको लागि राम्रो साबित हुनेछ। कडा मेहनत, अधिक समय दिनसक्ने भएकाले तपाइँको क्यारियरमा सफलता प्राप्त हुनेछ। जे होस्, केहि समस्याहरु महिना को शुरुवात मा आउन सक्छ। त्यहाँ परीक्षामा सफलता प्राप्त गर्ने संभावनाहरु छन्। परिवारमा सुखको वातावरण बन्नेछ।
कर्कट राशिका मानिसहरुको लागि यो महिना मिश्रित रहने छ। महिनाको शुरुवात राम्रो हुनेछ। क्यारियर को मामलामा महिना राम्रो साबित हुनेछ। हरेक पेशा, जागिर, व्यवसाय, रोजगारमा प्रगति हुनेछ। जागिरमा पदोन्नति पाउन सक्नुहुन्छ। व्यापार मा राम्रो सम्झौता हुन सक्छ। जे होस्, यो महिना शिक्षा को मामलामा औसत हुनेछ। तपाईले कडा मेहनत गर्नु पर्छ।
सेप्टेम्बर महिना सिंह राशिका मानिसहरुको लागि थोरै हल्का हुने अपेक्षा गरिएको छ। क्यारियर र रोजगार राम्रो हुनेछ, तर प्रकृति को उग्रता तपाइँको सफलताको मार्गमा आउन सक्ने बाधा हुनसक्छ । पढ्नको लागि विदेश जाने सपना पुरा हुन सक्छ। पारिवारिक जीवनमा सन्तुष्टि को कमी हुनेछ। परिवारका सदस्यहरु बीच विवाद हुन सक्छ। समय पनि प्रेम सम्बन्ध को दृष्टिकोण बाट औसत हुनेछ।
कन्या राशि भएकाहरुको लागि सेप्टेम्बर औसत भन्दा राम्रो हुनेछ। केहि क्षेत्रहरुमा तपाइँको जीवन धेरै राम्रो हुनेछ, तर केहि स्थानहरुमा तपाइँ सावधान रहनु पर्छ। यो महिना क्यारियर को मामलामा कामदारहरु को लागि अनुकूल छैन। मालिकका लागि राम्रो छ । एकै समयमा, महिना को पहिलो आधा व्यापार गर्नेहरु को लागि राम्रो हुनेछैन। उनीहरु पछि लाभान्वित हुनेछन्।
सेप्टेम्बर तुला राशिका मानिसहरुको लागि धेरै राम्रो हुने छ। आम्दानीका स्रोतहरु जारी रहनेछन्। ब्यापार, ब्यवसाय सुचारु रुपमा चल्नेछ। कामदारहरुको लागि समय राम्रो छ। पढ्ने को लागिपनि समय समग्रमा अनुकूल हुनेछ। जे होस् परिवारमा सबै राम्रो हुने आशा गरिन्छ, तर त्यहाँ बाहिर बाट सावधान रहनु आवश्यक छ।
वृश्चिक राशिका मानिसहरुले सेप्टेम्बरमा पनि धेरै लाभ उठाउन सक्छन्। यो महिना कामको हिसाबले उत्साहजनक रहनेछ। तपाइँ होशियारीसँग लक्ष्य प्राप्त गर्न को लागि प्रयास गर्नुहुनेछ र त्यहाँ पनि लाभ हुनेछ। आर्थिक दृष्टिकोण बाट पनि समय राम्रो छ। पैसा आउने क्रम जारी रहनेछ। तपाइँ पनि धेरै पारिवारिक खुशी पाउनुहुनेछ। तपाइँ तपाइँको बोली को बारे मा सावधान रहनु पर्छ।
सेप्टेम्बर महिना तपाईको लागि राम्रो रहनेछ। काम आदि मा सफलता को लागि यो महिना राम्रो हुनेछ। धन र अन्न को प्रचुरता हुनेछ। तपाइँको प्रतिष्ठा बढ्नेछ। भाग्यले पूर्ण साथ पाउनेछ। समय उत्साह र आनन्द मा बित्नेछ। पढाई को लागि समय धेरै राम्रो छ र सफलता। प्रेम सम्बन्ध को लागि, स्थिति धेरै राम्रो हुनेछ।
मकर राशि भएकाहरुको लागि सेप्टेम्बर महिना औसत रहने छ। यो न त धेरै रमाईलो छ न त धेरै परेशानी। यो महिना कामको सन्दर्भमा मिश्रित हुन सक्छ। महिनाको उत्तरार्ध काम र क्यारियरको लागि राम्रो हुनेछ। छोराछोरीलाई पढाईमा रुचि बढ्नेछ। जागिर खोज्नेहरुले जागिर पाउन सक्छन्।
सेप्टेम्बर महिना कुम्भ राशि भएकाहरुको लागि औसत फलदायी रहनेछ। यो महिना क्यारियर र काम को दृष्टिकोण बाट राम्रो हुन सक्छ। सम्मान बढ्नेछ। समय पनि विद्यार्थीहरु को लागि सफल हुन सक्छ। कामको सिलसिलामा हतार हुनेछ, जसको कारण परिवारमा पर्याप्त खुशी हुनेछैन। प्रेम सम्बन्ध को लागि समय सुखद छ।
सेप्टेम्बर महिना तपाईको लागि उतार चढावले भरिएको हुनेछ। अतिरिक्त प्रयास आवश्यक हुनेछ। प्रतियोगी परीक्षामा सफलता प्राप्त गर्ने सम्भावना छ। आर्थिक स्थिति पहिलेको जस्तै रहनेछ। परिवारमा सुख र शान्ति रहनेछ। यो समय प्रेम मामिला को लागि चुनौतीपूर्ण छ। तपाइँ महिनाको पहिलो हाफमा विशेष समस्या हुन सक्छ। अविवाहित मानिसहरुको विवाह को कुरा चल्नेछ। नयाँ पुस्ता बाट सभार